लाम्पार्ड चेल्सी फर्कने सम्भावना ! | Hamro Khelkud
लाम्पार्ड चेल्सी फर्कने सम्भावना !
लन्डन (एजन्सी)– चेल्सीले क्लबका महान खेलाडी फ्रान्क लाम्पार्डसँग स्टामफोर्ड ब्रिज फर्कने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । चेल्सीका अफिसिलय र डर्बीका प्रशिक्षक लाम्पार्डबीच क्लबको नयाँ प्रशिक्षकको विषयमा कुरा कानी भएको बताइएको छ ।
चेल्सीका प्रशिक्षक माउरिजियो सारीले क्लब छाड्ने निश्चित प्राय भएपनि विकल्पका बारेमा छलफल सुरु भएको हो । इटालियन प्रशिक्षक सारी यो साता युभेन्ट्स जाने सम्भावना रहेको छ । प्रिमियर लिगमा एक सिजन बिताएपछि सारी आफ्नै देश फर्कने सम्भावना बढेको हो ।
प्रशिक्षकका रुपमा लाम्पार्डको अनुभव लामो छैन । ठूलो टोली हरेको उनीसँग एक वर्षको मात्र अनुभव छ । तर पनि उनलाई लिएर क्लबका मालिक रोम इब्राहिमोचि सकारात्मक छन्। उनी आफ्ना पुराना खेलाडीमाथि भरोसा देखाइरहेका छन् ।
इग्ल्यान्डका पूर्व मिडफिल्डर मंगलबार दिवा खानाका लागि चेल्सीका पूर्व सहकर्मी डिडिएर ड्रोग्बासँग भेटिएका थिए । युभेन्ट्सका मासिमिलियानो एलिग्रीको ठाँउ सारीले लिने पक्का भएपछि यता लाम्पार्डको चर्चा सुरु भएको हो ।
एलिग्री, आयक्सका प्रशिक्षक इरिक टेन हाग पनि चेल्सीका सम्भावित प्रशिक्षकका रुपमा हेरिएका छन् । तर, खेलाडी भित्राउनबाट प्रतिबन्ध खेपिरहेको चेल्सी जानु कुनै पनि प्रशिक्षकका लागि सहज भने हुने छैन । १६ वर्ष मुनिका विदेशी खेलाडीसँग सम्झौता गरेका कारण चेल्सीमाथि खेलाडी खरिद गर्न प्रतिबन्ध छ ।